Ngwọta Millen 50 maka Kayseri nke 21 Nsogbu Kwa Afọ - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region38 KayseriNgwọta 50 Millen TL nye Kayseri nsogbu 21 Kwa Afọ
10 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, Central Anatolia Region, Akụkọ Asphalt, General, Ụzọ Awara Awara, Turkey 0
nde TL nye nsogbu nke kayser kwa afọ
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç mere nyocha n'okporo ụzọ nchịkọta nke abụọ nke obodo ahụ, nke ewuru n'ogologo kilomita nke 11, nke malitere na Talas ma gaa n'ihu na Hulusi Akar Boulevard ruo Baghdad Street. Onye isi obodo Büyükkılıç chọrọ na ọrụ ọrụ 50 nde TL ga-arụ ọrụ, nke na-ewepụ ọdịnihu akụrụngwa 21 kwa afọ nke obodo, ga-aba uru.
Onye isi ala Büyükkılıç, onye njikwa nke KASKİ Assoc. Dr. Ya na Ozgur Ozdemir na ndi isi ndi ozo, emechiri uzo abuo nke obodo a ka emechiri oge nwa oge ka emechara nyocha nke okporo uzo Arif Street choputara.
Onye isi obodo Büyükkıl who, onye kelere ndị ọrụ ọrụ a chọrọ ka ha mepee okporo ụzọ tupu Eid al-Adha ma nye ha ihe eji megharịa ọnụ, kwuru na ha nwetara ọ happinessụ nke mmecha nke ọrụ dị mkpa na akụrụngwa obodo. ọnụahịa nke okporo ụzọ a gaa na 21 nde TL. O kwuru, sị, kedu ụdị ọrụ anyị na-ejere ụmụ amaala ibe anyị nọ na Kayseri, '' ka o kwuru.
18 nke uzo n’ihu Eid al-Fitr. Onye isi obodo Büyükkılıç chetaara na ha mepere akụkụ okporo ụzọ, “Arif Street akụkụ nke Oriri Àjà, anyị emeela atụmatụ anyị. Dịka nsonaazụ, anyị etinyela ebe a n'ọrụ dịka anyị zubere. Ọ ga-amasị m ikele ndị obodo ibe anyị niile nyeere ndị otu anyị aka iji nghọta mee ihe n'oge ọrụ anyị. Ọ ga-amasị m ikele ndị ọrụ anyị bụ ndị nyere aka ebe a. Nke a bụ nnukwu ego. Daalụ ịdị mma anyị nwetara ya tupu oriri. Ka onye obula di nma ..
Ọ bụ ihe ngwọta nke ropeway maka nsogbu okporo ụzọ na Istanbul 22 / 10 / 2013 Ọ bụ ihe ngwọta nke eriri nsogbu nke okporo ụzọ Istanbul: okporo ụzọ Istanbul nwere ike ịbụ ihe ngwọta megide ihe gbasara 7. Enwere mmasị na ya. OZI OZI ŞART Urban Planning Specialist Dr. Recep Bozlağan kwuru na okporo ụzọ Istanbul abawanyela kwa ụbọchị, a ga-ewukwa okporo ụzọ ọhụrụ na Istanbul. Bozlağan kwuru, sị: "Ebe ọ bụ na ngwaahịa mba dị njọ nwere okpukpu atọ. N'ikwekọ, ịnya ụgbọ ala na Istanbul nwere okpukpu abụọ. Okporo ụzọ aghọwo nke a n'ihi na obodo ahụ na-eto eto pụrụ iche. N'ịtụle ihe ndị a nile, njupụta okporo ụzọ dị n'obodo ahụ dị elu. Ka anyi tinye aka anyi na akọnuche anyi; Obodo Istanbul Metropolitan maka Istanbul İstanbul
Ụgbọ okporo ígwè okporo ígwè ga-abụ ihe ngwọta maka nsogbu okporo ụzọ Salihlin 05 / 02 / 2013 Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ Salihlin si enweta nsogbu nsogbu okporo ụzọ ga-abụ ihe ngwọta maka nsogbu nke nsogbu okporo ụzọ na usoro Sinahli ka a na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè. Ọzọ burukwa ihe atụle n'isiokwu na-nzukọ nke Municipal Assembly na ìhè okporo ígwè amaghị nyere site ìgwè nke MHP òtù nzuko omeiwu, na-esịne ke burukwa nke kansul nzukọ February. Salihli Mayor Mustafa Ugur Okay, kwuru na ha kwadebere atụmatụ atụmatụ njem maka ihe ngwọta nke nsogbu okporo ụzọ. Ikpeazụ Omeiwu otu nzuko omeiwu na ìhè okporo ígwè oru ngo-a na-atụle na a nzukọ nke atọ ọzọ anya na nti nwale nke ọchịchị nkeji nke ndị amaghị, e kpebiri ime ka fruition kansụl obodo burukwa ọzọ. Isi: www.sondakika.com Kaynak
3. A Ga-achọ Nchọpụta Nsogbu Nsogbu 19 / 10 / 2013 Solutions ka okporo ụzọ Nsogbu Bridge eme M Survey kwubiri: Turkey si 'lọjistik' themed mbụ agụmakwụkwọ ka elu alụmdi na Beykoz lọjistik ọrụ aka College, 'Ọ bụ a ngwọta nke okporo ụzọ nsogbu nke atọ akwa?' nnyocha ya banyere isiokwu nke ọgwụgwọ emeela ka ọ pụta ìhè. N'ihe 68 nke ndị na-eme nchọpụta ahụ, "Ọ nwere ihe ngwọta maka nsogbu nke atọ okporo ụzọ?" Iji jụọ ajụjụ ahụ, "Ee," azịza ya, mgbe 32I "Mba" kwuru. Beykoz Logistics School of Logistics Applications and Research Center, Bülent Tanla na Prof. Dr. Dr. N'okpuru nkwekọrịta nke Okan Tuna, ọ ga-abụ ihe ngwọta maka nsogbu okporo ụzọ? nnyocha e mere na-eduzi. 26 August-3 Na September 2013, nke nwere ihe nlele nke nọchite anya Istanbul UM
Ihe ngwọta maka nsogbu ụgbọ njem nke Mersin 11 / 09 / 2014 Mersin na-achọ ihe ngwọta maka nsogbu njem: Mersin Metropolitan Municipality na-achọ ihe ngwọta maka nsogbu njem nke obodo. Mahadum Mersin (MEU) '' haziri ya na njem njem, a ga-akwadebe akụkọ ahụ dịka echiche nke ndị ọkachamara na tram ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ monorail nke a ga-ekpebi nke kachasị mma maka Mersin. Obodo Mersin Metropolitan na-achọ ihe ngwọta maka nsogbu njem nke obodo ahụ. Mahadum Mersin (MEU) '' haziri ya na njem njem, a ga-akwadebe akụkọ ahụ dịka echiche nke ndị ọkachamara na tram ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ monorail nke a ga-ekpebi nke kachasị mma maka Mersin. Mersin Metropolitan Municipality na Mersin University imekọ ihe ọnụ Mersin
Ihe ngwọta nke nsogbu ụgbọ okporo ígwè mechiri emechi site n'aka onye AK Party 17 / 10 / 2015 AK Side ngwọta nke nsogbu ụgbọ okporo ígwè mechiri emechi: Akụkụ nke òtù AK Akụkụ nke mbụ Aydin dị ka onye mmeri Mehmet Erdem, Germencik Ortaklar bịara leta ntuli aka. Ụmụ amaala, n'ihi ihe ize ndụ nke ime ụgbọ okporo ígwè nke TCDD kpuchiri ebe ọzọ na ekwentị TCDD Regional Manager kwuru na ekwentị. Erdem, bụ onye nwetara nzaghachi dị mma, mepee akụkụ ahụ mechiri emechi ka ọ gaa n'ofe ahụ na-eji osisi ígwè na-egbu osisi. N'okpuru ọnụ ụzọ nke ụgbọ okporo ígwè Ortaklar, Atatürk Street na Dr. A na-emechi ngalaba nke na-ejikọta Mahirbey Street na mkpo ígwè site na TCDD n'ọnwa Jenụwarị ikpeazụ n'ọnwa nke na ọ kpatara ihe ize ndụ. N'oge mgbede na-agafe na ala ala ahụ, ọ na-adịghị mma
Ngwá ọrụ ihe mgbochi na nsogbu ụgbọala na Antalya 13 / 09 / 2017 Obodo Antalya Metropolitan na-emejupụta ụlọ ahịa mbụ nke ụlọ ahịa na Antalya. Ụlọ Plaza 2000 dị na obodo nke ụlọ ọrụ 188 maka ụgbọ okporo ígwè maka ogige ntụrụndụ dị nso na Kaleiçi na Atatürk ụzọ ga-ezute mkpa ọ dị na-adọba ụgbọala. Obodo ukwu ahụ na-edozi nsogbu na-adọba ụgbọala na Kaleiçi na Atatürk Street, bụ ebe akụkọ ihe mere eme nke Antalya dị, ya na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ụgbọ oloko. Mpaghara nke İşcan District Plaza Ebe ANET na-arụ ọrụ, dịka ogige ntụrụndụ na-emeghe, na-emezi ka ọ bụrụ ihe ANET na-emegharị ma gbanwee ya dịka ụlọ ahịa nke oge a na-adọba ụgbọala ebe ụgbọala 2000 nwere ike ịbanye. Usoro ọrụ na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịchọta ebe kwesịrị ekwesị na-adọba ụgbọala, nke
Ihe ngwọta maka nsogbu okporo ụzọ nke Istanbul si n'aka obere onye agha 24 / 04 / 2014 Onye isi nke Istanbul nsogbu nsogbu okporo ụzọ: Istanbullines, otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem ụgbọ mmiri, 23 April National Sovereignty and Children's Day zutere ndị ọbịa. Istanbullines's Eskihisar Topcular line ferries iji na-enwe njem ụgbọ mmiri gaa na nke kachasị ụmụntakịrị, otu n'ime ihe ndị dị ụtọ nke otu n'ime nkeji nwere obi ụtọ. Eskihisar-Tavşanlı malitere n'afọ ka July 2013 250 oge na akara na anya n'elu 1,5 nde njem ebu ugbo ala na ihe karịrị otu puku İstanbullines, zutere na obere ọbịa 23 April National Ọbụbụeze na Ụbọchị Ụmụaka. N'ụbọchị ụmụaka, ndị minis ga-enwe ezumike ahụ site n'inwe njem njem ụgbọ mmiri ma na-enwe njem njem dị mfe ı
Ihe Ntuzi Na-eweta Ihe Ngwọta na Nsogbu Nsogbu na Karaman malitere 05 / 05 / 2019 Obodo Karaman, dị ka ihe ngwọta nwa oge maka nsogbu nke ịgbaba ụgbọala na obodo Anaftalar secondary school gbanwere ebe nke ụgbọala. Karaman Mayor Savas Kalayci haziri ebe ochie nke Anafieldlar Secondary School, bụ nke a kwaturu maka ịba ụba okporo ụzọ na ụkọ ụgbọala, dị ka ebe ndị na-adọba ụgbọala. Site na ntụziaka nke Mayor Kalaycı nyere, ụlọ akwụkwọ Anaftalar, bụ nke a kwaturu n'ime ọrụ Kent Square, gbanwere ghọọ ebe ụgbọala na-adọba ụgbọala site na ígwè ọrụ ọrụ nke Directorate of Science Affairs malitere. Mayor Kalaycı kwuru na site na nkwekọrịta a, a na-enwere mgbanaka okporo ụzọ ruo n'ókè ụfọdụ, nakwa na iji kwụsị kpamkpam nsogbu na-adọba ụgbọala, ha ga-aghọta ọrụ dịgasị iche iche ma chọpụta ihe ngwọta na-adịgide adịgide maka nsogbu ụgbọala.
Ngwá Egwu si Kayseri Metropolitan Municipality ka 30 Million TL 14 / 05 / 2019 Obodo nke Kayseri Metropolitan emeela ihe nro nke na-eri ihe dika 30 nde TL. Ụlọ ọrụ anọ na-ekere òkè n'atụ egwu ma debe onyinye. Emere obodo na distrikti dị iche iche site na Metropolitan Municipality na-enwe obi ụtọ maka ịmepụta akwara ọkụ. Ụlọ ọrụ 29 nke 909 4 dị puku mmadụ iri abụọ na isii. Nalbantoğlu Na-ewu: 23 nde 486 puku TL İstaş Yapı: 26 nde 186 puku TL Aydnn Construction: 29 nde 881 puku TL Öztaşlar Mwube: 32 nde 584 puku TL Uche ga-agwụcha mgbe nnyocha nke ibudata.
'Smart' ihe ngwọta maka egwu egwu 24 / 04 / 2013 Nhọrọ Smart Ard ngwọta maka nsogbu ndị na-eme ka okporo ụzọ dị egwu. Iji belata njedebe okporo ụzọ, a malitere ịme ihe ịrịba ama niile na akara ngosi. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ ga-adị ndụ, akara ngosi dị iche iche ga-enye ịdọ aka ná ntị dị iche iche maka ndị nwe ụgbọala site na kọmpụta. Nke bụ eziokwu bụ na Istanbul bụ obodo nke abụọ nke ụwa na mgbakọ okporo ụzọ achịkọtawo gọọmentị. Na Turkey ụzọ niile gafee okporo ụzọ na iji belata njupụta ọmụmụ e butere n'ihi na e guzobere nke ihe ịrịba ama nke nwere ọgụgụ isi okporo ụzọ egosi ihe ịrịba ama. Otu ụlọ ọrụ Turkey na nke mba ọzọ kpọtụrụ ya na General Directorate of Highways, na-ezuru ọnụ ụzọ nke usoro akụ na ụba iji jikwa okporo ụzọ, ụzọ ụgbọ oloko, ikuku na ụzọ ụgbọ mmiri na-esi n'otu ebe. A ga-etinye usoro ohuru ahụ na ụzọ intercity na center Üzerinde
Okporo ụzọ okporo ụzọ dị na Kayseri
Ọ bụ ihe ngwọta nke ropeway maka nsogbu okporo ụzọ na Istanbul
Ụgbọ okporo ígwè okporo ígwè ga-abụ ihe ngwọta maka nsogbu okporo ụzọ Salihlin
3. A Ga-achọ Nchọpụta Nsogbu Nsogbu
Ihe ngwọta maka nsogbu ụgbọ njem nke Mersin
Ihe ngwọta nke nsogbu ụgbọ okporo ígwè mechiri emechi site n'aka onye AK Party
Ngwá ọrụ ihe mgbochi na nsogbu ụgbọala na Antalya
Ihe ngwọta maka nsogbu okporo ụzọ nke Istanbul si n'aka obere onye agha
Ihe Ntuzi Na-eweta Ihe Ngwọta na Nsogbu Nsogbu na Karaman malitere
'Smart' ihe ngwọta maka egwu egwu